Umkhiqizo Nensizakalo - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngu-20 yentuthuko, inkampani yethu yakhe isethi yemikhiqizo nezinsizakalo ngobuchwepheshe be-FMBR futhi njengengqikithi. Esikunikeza khona akuyona nje imikhiqizo yethu ye-FMBR kuphela kodwa futhi nesethi yezixazululo zokwelashwa kwendle ezithuthukile nezivuthiwe.
Izinsiza ezihlanganisiwe ze-FMBR
Ungumshini wokuhlanza wamanzi angcolile ohlangene ophakeme kakhulu, udinga kuphela uhlelo lwe-pretreatment, uhlelo lokungcola kanye nenani elincane lomsebenzi womphakathi ukwakha i-WWTP, okwenza umsebenzi wokwakha ube lula futhi usheshe. Ilifanele ihhotela, ezemidlalo ezibabazekayo, isikole, inkundla yegalofu, isikhumulo sezindiza, indawo yezentengiselwano, indawo yasemadolobheni neyasemakhaya, ukwelashwa okusatshalalisiwe nokunye
Indawo yokuhlanza indle ehleliwe
Imishini edidiyelwe edidiyelwe kakhulu idinga ukwengeza uhlelo lokulungiselela ukuphathwa kwamanzi uhlelo lokukhipha amanzi kanye nenani elincane lobunjiniyela bezokwakha ukwakha indawo yokuhlanza indle, okwenza ukwakhiwa kwesikhungo sokwelashwa kube lula futhi kusheshe. Ifanele izimo zesicelo eziningi ezinjengamahhotela, izindawo ezinhle, izifunda zezentengiselwano zezikole, amadolobha, kanye nokusatshalaliswa okusatshalalisiwe.
Insizakalo yokwelashwa kwendle
Sine-R & D eqinile, idizayini yezobunjiniyela, i-O & M, amaqembu okukhiqiza akwazi ukuhlinzeka ngezixazululo zokwelapha zamanzi angcolile, ukwakhiwa kwesitshalo sokwelashwa kwamanzi angcolile, isitshalo sokuhlanza amanzi angcolile i-O & M, ukuhlinzekwa kwemishini kanye nokutshalwa kwephrojekthi yamanzi angcolile.
Umklamo we-WWTP, i-WWTP O&M
Ukutshalwa Kwezimali Ngamanzi Angcolile